Spaces ndiyo imwe nzira yeGoogle kuSlack kana Pocket | IPhone nhau
Spaces ndiyo imwe sarudzo yeGoogle yeSlack kana Pocket
Isu tinowanzo taura newe nezvePocket inogadziridza uye nemamwe marudzi emaapplication akadaro, zvakakosha nhasi, iine huwandu hweruzivo uye mabasa atinobata, kuve nezvose zvakanyatsorongeka. Kune izvi, isu tine dzimwe nzira dzakawanda, kubva kuTodoist, kuenda kuPocket kuburikidza neSlack. Nekudaro, kunyange hazvo zvese izvi zvakanaka, tinoona kuti hunyanzvi huri kukura, uye ikozvino Google yasvika kuzopa zviyo zvayo zvejecha, vakomana veAlfabheti havasiye chero chisina kuchena software niche, uye ikozvinoIvo vanga vachidawo kupinda musangano wemapoka uye data kufambisa neSpace.
Chinhu chakanaka nezveSpace chiri pachena, chinhu chakanaka nezveGoogle… kukoka chero munhu watinofanira kumutumira chete chinongedzo kubva kuboka redu uye ivo vanokwanisa kupinda nyore nyore neakaundi yavo yeGoogle, mazuva ano asina. Zvakare, kusiyana neSlack, tinogona kurumidza kutaura pane zvatatumira.
Aya ndiwo mashandisiro anoita Google kwatiri:
Spaces chishandiso chemapoka madiki akagadzirirwa kugovana chero chinhu.
• Gadzira nzvimbo pane chero nhaurwa nekamwe tap.
• Koka chete vanhu vaunoda neinokurumidza link.
• Goverana zvemukati nekuda kwekubatanidzwa neGoogle Tsvaga, Chrome, Mifananidzo uye YouTube.
• Ita hurukuro pamberi pechinyorwa.
• Tsvaga chero chinhu nekukurumidza nekutsvaga mazwi akakosha.
Gadzira nzvimbo ine bata uye koka vanhu vane chinongedzo nekukurumidza kuburikidza neshoko, email kana chero chaunoda. Kutenda kubatanidzwa kune simba neGoogle Tsvaga, Chrome, YouTube neGoogle Mifananidzo, unogona kugovana uye kuona zvinyorwa, mavhidhiyo uye mifananidzo pasina kana kusiya application. Iwe unogona kutotaura munguva chaiyo yakanangana padyo nezvakanyorwa zvauri kutarisa kuitira kuti musoro usatsauke. Uye kana iwe uchida kutsvaga chimwe chinhu chawakawona munguva pfupi yapfuura mune imwe yenzvimbo dzako, unogona kuzviwana munguva pfupi nebasa rekutsvaga.
Sezvo ivo pachavo vachiratidza, pamwe imwe yemabhenefiti makuru ndeyekuti ine injini yekutsvaga yeGoogle, pamwe neakasara enzvimbo yewebhu yeGoogle, senge YouTube kana Google Mifananidzo. Kuronga mapoka ebasa, vadzidzi kana ingori nzvimbo yekugovana ruzivo uye dhata neshamwari dzako, Spaces yave nzira yakanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Spaces ndiyo imwe sarudzo yeGoogle yeSlack kana Pocket
Iyo iPhone 7 inogona kusvika gare gare nekuda kwekugadzirwa kwayo kwakaomarara